izitini eGauteng ezishibhile Maxi Brick
IMaxi Bricks (izitini) Yakho eGauteng
Izitini zokwakha zanamuhlanje ziyabiza. Kuyasiza ukuthi uthole izitini ezishibhile. Izindawo eziningi, zithhanda imali, azikunakekeli wena makhi. Izitini zase Maxi Bricks, zibiza kahle, futhi ziyasebenza.
Udinga izitini eziwu:
35 Ukwakha udonga olujwayekile.
Zonke izitini zase Maxi Bricks zakhiwe kahle, ngesineke, ngeke zikuphoxe. Akusizi ukuthenga isitini esikhulu, esijika singasebenzi. Uma uthenga izitini, bhekisisa kahle ukuthi isona lesi osidingayo, nokuthi siyasebenza yini. Awudingi ukubheka kude, indawo ikhona la eJohannesburg. Futhi zilithwa kuwena egcekeni.
Umawakha umuzi noma ibhilidi, udinga izitini, nosimende. EMaxi bricks siyazidayisa zonke lezizinto. Usimende wenzelwe ukuhlanganisa izitini umawakha. Usimende awudingi isikhathi esiningi ukoma, woma kalula. Bahlukahlukene osimende, abafani futhi imisebenzi yabo bonke ihlukene. Usimende omuningi wenziwa eChina, bese ulethwa la.
Emaxi bricks siyazi ukuthi kubalulekile ukubanazo zonke izinto zokwkha, akusizi uba nezitini kuphela. Usimende ayudingeka. Ingakhoke sikudayisa konke. Zonke izinto zethu zokwakha zishibhile. Uma udinga sikulethele kwakho, siyakulethela.
Uma wakha umuzi,noma ibhilidi kubalulekile ukuba namathuluzi asebenzayo. Uma unganawo amathuluzi ekumele ubenawo umawakha, ukwakha kwakho kunga thatha isikhathi eside. Amanye amathuluzi, enzelwe ukuvimbhela ukulimala,ingakho kubalulekile ukuba nawo. Maningi amathuluzi ongawasebenzisa uma wakha:
Ahlukahlukene amathuluzi, futhi imisebenzi yawo, ayifani. Ukuze ukwazi ukwakha, uqede nesikhathi, udinga manye almathuluzi.
Ukwakha ngezitini neMaxi bricks
Ukwakha, nokubeka kwezitini akuyona into ebukhunu ukuyenza. Uma uzijwayeza ukwenza njalo, kugcina sekulula, futhi sekushesha. Ukwakha udinga ukuhlanganisa usimende nenhlabathi, kubangcono uma uhlanganisa ebhakedeni. Maningi amathuluzi owadingayo ukwakha:
Iline & pins
Ibrush ne-tape measure
Amanye amathuluzi ongawa sebenzisa uma usebenza ngezitini,ekwakheni umuzi wakho.
Izitini, azidingi ukusetshenzi-selwa into eyodwa. Zingenza umusebenzi wezinto eziningi. Ezinsukwinin zakudala, zazi setshenziselwa kumaroofs. Zazihlala isikhathi eside,futhi zikwazi ukumela isimo sezulu. Izitini ungakwazi ukuphehla ngazo noma, uzifake phansi egcekeni lakho. Izinto ongakwazi ukusebenzisa izitini kuzona:
Ukwenza iArt ngazo
Izitini zakwa Maxi bricks ziwenza yonke imisebenzi. Abanye abantu babiyela nagzo, kwingadi yabo, khona bezo vimbela izinkukhu, noma izilwane ezidla izithelo.
to read about Maxi Bricks in English click here
AmaLinks gezitini eMzansi: